Van Isothermal: ukufakwa. van Isothermal ngezandla
Ukukhiqizwa icwecwe eliqophayo-uhlobo van kubaluleke kakhulu. Lokhu kusebenza ezokuthutha ehlukahlukene izimpahla esiqandisini okonakalayo. Ngamunye van isothermal bakwazi ukuhambisana nayo yonke imithetho kwezimiso lokushisa (kokubili abandayo futhi efudumele). Umgomo we operation walo mzimba ufana thermos abavamile, okuyinto unawo lokushisa ethile. Kulesi Umklamo umshini kumelwe ihlangabezane nezimiso seal futhi ekwazi ukumelana namandla omoya, ikakhulukazi kule esiqandisini ezokuthutha. Ngakho-ke, ngisho emsebenzini wokukhiqiza nezimfuneko zakhe ezikhethekile - ukudluliswa ukushisa Coefficient, isothermal futhi uhlole yobunzima yomzimba laboratories ekhethekile.
Ukuze kukhiqizwe lezi imishini isetshenziswa insimbi engagqwali, nensimbi zinc-kuhlinzwa, aluminium, plastic kwagcizelela noma ipulangwe laminated. I heater ingasetshenziswa njengendlela polyurethane foam noma polystyrene Foam. isizinda umzimba kuyinto okunzima lift Uhlaka ukuthi ogibele chassis izimoto iziqobosho kanye uzimele. iminyango egoqekayo babe lwezimpawu iraba lula kubekwe uphawu futhi ukuvikelwa uthuli futhi umswakama. Iminyango ivulwa degree angu-270, izakhi ezikhethekile umthwalo eziveza ngesimo a isiqhebezo nokuvumela cam ukuhlinzeka elula kakhulu futhi kulula ukuvulwa zabo, emnyango uthola rigidity ezengeziwe, kunciphise amathuba ngokuhlaziya. Kuyaphawuleka ukuthi "iNsephe" isothermal van ungenza oda, kubaluleke kakhulu ukuba sivumelane nazo zonke izimfuneko.
Ngesisekelo imishini enjalo nangokuvikela izinto, okunikeza ukushisa ebusika futhi epholile ehlobo. Seziqa zokuthutha uvumele ukumisa imikhiqizo yokuhamba, kule moto isethi esingeziwe imishini lwaluyophola. Yingakho imodeli isothermal ukhetho best, okuyinto ilungele izinkinga ezihlukahlukene, futhi ingasetshenziswa emikhakheni ehlukahlukene.
Okwamanje, kunezinhlobo eziningana ezimotweni:
ezimotweni futhi namaveni esiqandisini;
ezimotweni futhi namaveni ukushisa namakhaza ka isangweji panel;
ukubiyela ezimotweni ngci.
kukhona ukuthi "iNsephe" izimoto Ezweni lethu ethandwa kakhulu semininingwane inketho lezi ezimotweni. Okwamanje, kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko yokwakhiwa - isangweji panel kanye uzimele. Esimweni sokuqala it has multilayer ngci van amapuleti ekhethekile, yonke panel ethe njo ndawonye vacuo ngesikhathi ingcindezi ukuthi inika okusezingeni eliphezulu ezishisayo ukwahlukanisa ukusebenza kanye ukumelana lokushisa ukweqisa okuseqophelweni ezinkulu ezengeziwe. Uhlobo lwesibili kuyinto Uhlaka zonke-metal eyenziwe izingqimba ezintathu: elingaphandle, amashidi lashukumisa, ukushisa nangokuvikela izinto phakathi futhi yangaphandle egqoke impahla. Qualitative ukujiya ukwahlukanisa okusetshenziswayo kunikezelwe okungenani 75 mm. Ukuze kukhiqizwe lezi imishini sisebenzisa ubuchwepheshe eziningi zalezi zinsuku, ebavumela ukunikeza ukuqina, ukumelana endaweni enobudlova, zemvelo kanye ukugqwala. Yilokho okwenza lezi ezimotweni okuhlala kanye esisebenzayo.
Njengoba sekushiwo, ezweni lethu, van isothermal esekelwe "iNsephe" ukhetho elilungile kakhulu, inzuzo, ethandwa futhi iqine. It hhayi kuphela kubiza esingaphansi nozakwabo amazwe, kodwa futhi ukonga ngaphezulu, isikhathi eside, linesizotha enkonzweni futhi ilungele ukusetshenziswa ngokomongo Russian. imishini enjalo ziyajabula uma imigwaqo yendawo futhi babhekane kahle imisebenzi nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Kuyaphawuleka entsha "iNsephe NEXT» imodeli. Lokhu imishini yesimanje bonke izikhathi, okuyinto hhayi kuphela akwazi ukubamba le fancy abanikazi imoto, kodwa futhi Kuye kwaphawulwa ngochwepheshe abaningi kulo mkhakha njengoba imoto, ukuhlangabezana nazo zonke izidingo abashayeli.
Le mfuneko esemqoka enkulu ekwakhekeni yale mishini kuthiwa ukuthi kumele abe ukwahlukanisa eliphezulu kumbuthano (odongeni, phansi, ophahleni). Njengoba sekushiwo, njengoba ukwahlukanisa ngokuvamile isetshenziselwa Foam ezivamile (polystyrene), ugqinsi okufanele kube esiphezulu okungenani 40 - 100 mm, kuyinto ukuguqulwa 50 futhi 75 mm. Lapho ithebhu heater kule "iNsephe" isothermal van kungenziwa olunye kusetshenzwe ngokuthulula polyurethane foam, okuyinto ezigcotshwe emagumbini nemifantu, ngaleyo ndlela sigweme okuthiwa amabhuloho abandayo bese unika esiphezulu izinga Foam ibhukumaka. Kuyaphawuleka ukuthi imodeli ne isangweji panel abhekwa okukhethwa best for ukufakwa ahlukahlukene yezimoto umshini ifriji.
van Isothermal "iNsephe" - a ukuthuthukiswa olukhethekile ochwepheshe yasekhaya, eziqondiswe ekuhlangabezeni izidingo izinkampani, abashayeli yangasese namabhizinisi amancane ukuthuthwa kwemikhiqizo ezigugayo, okuyinto ebaluleke kakhulu lokushisa ethile. Ngakho, niche esikhulu ukuthuthwa kwemikhiqizo ukudla bekulokhu kumatasa, izimbali, nemithi kanye nokunye okufana nalokho, eyayibonakala kuphela amazwe futhi ngempela eqolo ezimotweni efrijini. Abaklami we van sakwazi ukuxazulula izinkinga eziningi ukuze uqaphele imibono yabo, futhi ekugcineni, ukwakha imoto ngokuphongoza izimbangi zayo yobunzima, umhlobiso elingaphakathi ezinye nezinye izici, lapho izinkomba main yinani eliphansi imoto uma ziqhathaniswa yokungenisa analogue, cheapness ukulungisa indawo izingxenye.
Dala van isothermal ngezandla akulula, ngakho uma umuntu akanayo isipiliyoni, kungcono ujike kuchwepheshe ezinhle. Ngokwemvelo, kufanele ukhokhele zabasebenzi kanye izinto. Nokho, kulesi simo, yini nje uthole imoto enhle elihlangabezana nazo zonke izidingo, kodwa futhi isiqinisekiso kuwo wonke umsebenzi owawenziwa. Uma ngokungazelelwe iyangena izinkinga, uzokwazi ukuxazulula kubo ngaphandle ekuthengeni izinto ezingadingekile futhi njengoba fast ngangokunokwenzeka. Kuyaphawuleka ukuthi ukulungisa ngci ezimotweni nayo kungcono ishiyelwe ochwepheshe.
Ukuvela ezimotweni endleleni. "Citroen" (ikhumbi)
Shunting udizili esitimela: ezibekiweko nezithombe
Izici imoto yakho "iNsephe-esilandelayo". Tuning
PAZ 3204: ukuguqulwa Ukucaciswa
Bus ekilasini encane PAZ-652: izici lobuchwepheshe. "Keyway" ibhasi
ZIS-154 - imoto yokuqala basezindlini ngokunakekelwa injini hybrid
Indlela yokwenza okumnandi okuzenzela isoso utamatisi ebusika?
Izizathu ukuthandwa izindlu ezweni laminated yokwakha yaseGrisi amapulangwe
Ukubambisana komthengi kungabe kunjalo? Iyini insalela yomthengi nomkhiqizi?
14 Ways To entengiso Kulethe Response Explosive
Umuthi "Smecta" Umhlahlandlela: umuthi best izinsana
The best ikhekhe recipe "isiqu bolile"
"Cougar Idolobha": nabalingisi ngesakhiwo
Abadlali Abangefani. "Uthisha-e-mgomo" - comedy ngabafundisi oluvelele